CIA-da Oo Aamisan in Ruushka uu Trump ka Caawiyay ku Guulaysiga Doorashadii la qabtay – idalenews.com
CIA-da Oo Aamisan in Ruushka uu Trump ka Caawiyay ku Guulaysiga Doorashadii la qabtay
NY(INO) — Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa laamaha sirdoonka amray in la baaro weerarro dhanka Internetka ah oo Washington lagu soo qaaday intii lagu guda-jiray doorashadii madaxtinimo ee la soo gaba-gabeeyay.
Wargaysyada kala ah New York Times iyo Washington post ayaa amarka madaxweynaha kadib sheegay in Ruushka uu Donald Trump ka caawiyay in uu ku guulaysto doorashadii la qabtay ,iyaga soo bandhigay xogo la xiriira arimahaas.
Wargayska Times ayaa isna daabacay in Ruushku uu jabsaday xogaha xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ,balse kaliya la helay xogaha lagala baxay kompiyuutarada xisbiga uu ka tirsan-yahay madaxweynaha hadda talada haya.
“Waxaan aad ugu kalsoonahay in labada xisbi-ba la jabsaday , balse kaliya ay sii daayeen tan xisbiga Dimuqraadiga “ ayuu yiri mas’uul ka tirsan maamulka Obama oo la hadlyay wargayska Times.
Waxaa kaloo wargayska uu sheegay in laamaha sirdoonka Maraykanka ay aqoonsadeen dadkii ku lugta lahaa weerarada lagu qaaday doorashada , balse ilaa iyo hadda aan cidna loo ciqaabin, kuwasi oo aan la sheegin halka ay ku sugan-yihiin.
Washington post ayaa aaminsan in Ruushku uu fara-galin ku sameeyay doorashada ,isaga oo Donald Trump ka taageeray in uu ku guulaysto doorashadii dhacday ,waxaana uu wargayka uu soo xigtay ilo aan la shaacin.
“Ujeedka waxa uu ahaa in musharax mid kale laga doorbido ,isla markaana Donald uu ku guulaysto Doorashada “ ayaa lagu yiri warbixin-ta uu soo daabacay Wargayska Washingtonpost oo kamid ah kuwa ugu afka dheer dunida.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in eedaymahan ay lamid yihiin hadaladii ahaa in SADAM HUSIEN uu haysto hubka wax bur-buriya ,isla markaana ay doorashadu ahayd mid si xalaal ah u dhacday.
Ugu danbayn, Adam Schiff oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in xukuumadda ay arintan si taxadar leh uga shaqayso si loogu soo bandhigo dadweynaha ,taasi oo sii abuurtay shaki hor leh oo laga qabo doorashadii uu ku guulaystay Trump.
AQRISO: Canshuurta Degmada Afgooye oo wareer ka taagan cida qaadeyso
Somali forces capture village in Southern Somalia from Al-Shabaab